Man United 1-1 Stoke: Red Devils Oo Taako Kala Kulantay Stoke City Kuwaasoo 36 Sannadood Ka Dib Ka Fogaaday Inay Guuldarro Ku Soo Gaarto Old Trafford. - Wargane News
Home Sports Man United 1-1 Stoke: Red Devils Oo Taako Kala Kulantay Stoke City...
Man United ayaa taako kala kulantay Stoke City oo marti ku aheyd Old Trafford iyadoo gool uu hogaanka ugu dhiibay Anthony Martial oo kursiga keydka ka soo kacay uu kansalay xiddiga khadka dhexe ee Stoke City Joe Allen, iyadoo Red Devils uu mar kale cadaadiska ku soo laabanayo iyadoo Stoke City ay dhibicdii ugu horeysay ku qaadatay Old Trafford muddo laga joogo 36 sannadood.
Tababare Jose Mourinho ayaa ku soo shirtagay shax la mid aheyd tii uu kaga badiyay Leicester City, iyadoo kabtan Wayne Rooney uu mar kale ku soo bilowday kursiga keydka.
Qeybtii hore ee ciyaarta waxa ay aheyd mid dabeysha ay hal dhinac u socoto, Man United ayaa ciyaarta heysatay laakiin waxa ay ku hungoobeen in fursadihii ciida ka badnaa ee ay heleen inay gool u bedelaan.
Fursado qaali ah ayaa soo maray kooxda Red Devils oo ay ku jirto fursad hal ka hal ah oo laga badbaadiyay Ibrahimovic iyo labo fursadood oo halis ahaa oo soo maray xiddiga ugu qaalisan dunida Paul Pogba, balse si lama filaan ah ciyaarta waxa ay qeybtii hore ku dhamaatay barbaro goolal la’aan ah.
Qeybtii labaad sheekada waxa ay ku bilaabatay si la mid ah qeybtii hore ka dib fursado darbooyin ah oo ay heleen Paul Pogba oo laga badbaadiyay iyo Ander Herrera oo kubad halis ah dulmariyay goolka, tababare Jose Mourinho ayaa talaabo qaaday.
Waxa uu bedelay ku soo geliyay kabtankiisa booska joogtada waayay Wayne Rooney iyo xiddiga Faransiiska Anthony Martial kuwaasoo kala bedelay Mata iyo Lingard daqiiqadii 67aad. Daqiiqadii ku xigtayna Ibrahimovic ayaa fursad kale oo dahabi ah ay soo martay laakiin ma uusan haleelin shabaqa.
Labo daqiiqo markii ay Rooney iyo Martial garoonka ku jireen waxa ay durbadiiba ka shaqeeyeen inay hogaanka u dhiibaan Manchester United, Rooney ayaa caawiye ka ahaa isagoo u taagay kubada Martial kaasoo darbo fiican kubada ku dabamariyay goolhaye Grant.
Laakiin hogaanka Manchester United waxa uu waaray ilaa daqiiqadii 82aad markaasoo kooxda martida aheyd ay barbareysay ciyaarta.
Goolhaye De Gea ayaa soo tufay darbo uu ku soo tuuray daafaca Johnson, waxaa kubada soo laabatay soo darbeeyay Walters iyadoo ciyaaryahan ay ku dhacday ka hor inta aysan kubada horimaan goolka hortiisa, waxaana shabaqa ku taabtay xiddigihii hore ee Liverpool Joe Allen oo u soo degdegay, waxaana ay ciyaarta noqotay barbaro 1-1 ah
Wax yar ka dib goolka barbaraha, Man United ayaa fursad kale heshay, waxaana mar kale ku qubeystay Zlatan Ibrahimovic oo fursado tiro badan helay iyadoo goolhaye Grant oo wacdarro dhigay maanta uu ka badbaadiyay.
Daqiiqadii 89aad Man United ayaa birta ruxday ka dib karoos uu Rashford soo dhigay, Paul Pogba ayaa madax la aaday laakiin garabka ayay kaga dhacday iyadoo kubada ay birta ku dhacday ka hor inta aysan Stoke City iska bixinin.
Waxa ay ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah iyadoo Man United ay ka qoomameyn doonto fursadihii badnaa ee ay iska qasaariyeen kulankaan. Goolhaye Lee Grant ayaana muran la’aan ah xiddiga garoonka ee kulankii maanta